chhalphal News - छविराजको ‘मंगलम’ हेर्न जब रेखा पुगिन् !
छविराजको ‘मंगलम’ हेर्न जब रेखा पुगिन् !
सोमबार, २८ फागुन २०७४, ०८ : ३२
काठमाडौं । शुक्रवारबाट देशैभर प्रदर्शनमा आएको प्रतिक्षीत फिल्म ‘मंगलम’ ले यतिबेला दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिनदेखि अधिकांश सिंगल 'स्कृन' दर्शकले भरिभराउ छन् । पहिलो शोका दर्शकबाट मिलेको उच्च वर्ड अफ माउथले फिल्मको विजनेसमा ठुलो प्रभाव पारेको छ ।
यसैबीच, आइतवार विग मुभिजमा फिल्मको प्रेस शो राखिएको थियो । जहाँ पत्रकार मात्र होइन चलचित्रकर्मीहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो । ‘मंगलम’ हेर्न निर्माता छविराज ओझाकी पूर्वपत्नी तथा अभिनेत्री रेखा थापा समेत पुगेकी थिइन् ।
यसअघि छविराज, अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलसँग रेखा निर्मित तथा अभिनीत फिल्म 'रुद्रप्रिया' हेर्न हल पुगेका थिए । रेखाले त्यही गुन तिरिन् ।
फिल्मको फस्ट हाफमा उनले ‘मंगलम’ की अभिनेत्री शिल्पा, अभिनेता पुष्प खड्का, छविराजका छोरा साकार ओझासँग सँगै बसेर तश्बिर खिचाइन् । छविराजसँग तश्बिर खिच्न नमानिरहेकी रेखा अन्ततः सञ्चारकर्मीको आग्रहपछि बाध्यतामा परिन् । अनि, धेरैपछि यी दुई मिडियाको क्यामेरामा कैद भए ।
फिल्म हेरेपछि रेखाले कलाकारदेखि निर्माता ओझासम्मको तारिफ गर्न छुटाइनन् । उनले भनिन्, ‘शिल्पा र पुष्पको अभिनयले मन छुन्छ । अन्य कलाकारहरुको अभिनय पनि तारिफ गर्न योग्य छ । निर्देशक नवल नेपालले आफूलाई फेरि एकपटक अब्बल निर्देशकको रुपमा प्रमाणित गर्नुभयो । लगानी गर्न निर्माता ओझाले कञ्जुस गरेका छैनन् ।’
फिल्मले श्रीमान र श्रीमतिबीचको कथा बोल्छ । यस्तै, अधिकांश पत्रकारले पनि फिल्म हेरिसकेपछि प्रशंसा गर्दै ‘मंगलम’ टिमलाई बधाइ दिएका थिए । फिल्म हेर्ने पत्रकारबाट निर्देशक नेपालको निर्देशकीय पक्ष र कलाकार द्वय शिल्पा र पुष्पको कामले तारिफ पाएको थियो ।